Nye anyị niile nwere mmasị ịga njem na ndị na-enwekwa mmasị ime ya mgbe ọ bụla anyị na-ezumike ụbọchị ole na ole, anyị maara na ndụ onye njem nleta adịghị mma ka ọ dị. Ọ dịghị onye na-ewe mmalite adahade si anyị! N'ezie, a gwara anyị niile n'oge ụfọdụ na: "Ndi bụ nne nke sayensị" ... ma ọ bụrụgodị na anyị nwere ndidi, anyị enweghị ike ime ka queues na ngosi ihe mgbe ochie na-enweghị agwụcha ike gwụrụ! Na n'ezie nke a nwekwara ike ịgbatị ụwa nke ski. Onye ọ bụla skier, n'otu aka ahụ anyị na-agwa gị, ga-agwa gị na ski bụ ihe ịtụnanya… na-agwụ ike na-enweghị atụ. Nke ahụ kwa. Enwere isi ihe na ndụ nke onye ọ bụla skier, karịsịa ma ọ bụrụ na oge dị mma, mgbe anyị na-echefu mmetụta nke ihe ọ dị ka ịga ije na-enweghị eriri. Kedu ihe ọ na-atụgharị na ya? Ọfọn, hụrụ si n'èzí, anyị na-ara. Site n'ime ... anyị anaghị eche banyere ihe niile. Adrenaline anyị na-ahapụ na mmetụta nke ịrịda ugwu bụ nnọọ ihe pụrụ iche! Mana ee, a na-egwu egwuregwu na ọtụtụ ihe, ihe anyị gwakwara gị n'otu akụkọ na blọgụ anyị n'oge na-adịbeghị anya (Chọpụta egwuregwu niile ị na-eme ski), ma anyị abịaghị ugbu a ịgọnarị ya. Ihe anyị chọrọ ime ka ị chee bụ: ị chere na ọ ga-abụ obere ike ọgwụgwụ ma ọ bụrụ na ị na-eme ya n'ehihie, kama ime ya n'abalị? Ọzọkwa, n'agbanyeghị ike ọgwụgwụ ... ị na-eche na ọ ga-abụ a ahụmahụ na-afụ ụfụ?! Mgbe akụkọ a gachara, ị gaghị enwe ike ịnọ na-agbalịghị ya.
Ịwụ elu n'abali: ỌMỤMỤ MMADỤ Ọ BỤLA
Enwere ọtụtụ ebe ntụrụndụ, ma n'ime Spain ma ná mba ọzọ, bụ ndị nabatala nhazi nke mkpọda ha iji kwe ka ndị na-agba ski. ọzọ abalị ikwiikwii nwere ike ịnụ ụtọ usoro a. Ma mba, awa abụghị etiti abalị. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na anyị eburu n'uche otú anyanwụ na-ada n'oge oyi na mba anyị, ịkwọ ụgbọ mmiri n'abalị nwere ike ịmalite n'ihe dị ka elekere isii nke ehihie, dabere na oge na ụkpụrụ ya. Ma ka o sina dị, mkpọda ski chọrọ a nkwadebe, n'ihi ya, a na-agbanye snow ahụ ma mee ka ọ dị jụụ ruo nwa oge tupu ya emepee ha n'etiti ụbọchị. N'ihi nke a, ndị na-agba ọsọ na-ekpebi ịnwale (ma ọ bụ kwugharịa) usoro ịgba ọsọ a ga-enweta ọnọdụ snow dị ka nke ha nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na ha bụ ndị mbụ ịrị elu n'oge dum. Maka ihe ndị a niile, o doro anya na ịgba ọsọ abalị abụghị ihe ọzọ karịa ịgba ọsọ n'abalị, ya mere ogo nke isi ike ya agaghị adị ukwuu karịa omume na ìhè anyanwụ n'etiti. Ebe ntụrụndụ na-enye ya anaghị ajụ ndị skiers maka ụdị ọ bụla achọrọ ma ọ bụ ọkwa dị iche iche, ọ bụ ezie na ha na-echetara ha na, n'ozuzu, ha "ga-aga n'efu", ebe ọ bụ na oge ụlọ akwụkwọ dị n'ụtụtụ. Nkwubi okwu: ọ bụrụ na ịmalite ski site na ọkọ, mụta n'ụtụtụ ... ma ị ga-enwe oge ịnwale ụdị a n'oge ọzọ!
Ịgba ọsọ abalị na SPAIN
Ị na-enwekwu mmasị ịmata ime ụdị ski a? Nkịtị. Anyị na-ahụ ugbu a nke bụ isi ihe ama ama na Spain ebe ị nwere ike ime ya.
Sierra Nevada Ọ bụ ebe egwuregwu ski izizi na Spain nke họọrọ ịgba ski abalị. Ọdụdọ a nwere egwu egwu abụọ nwere ọkụ: Osimiri, na 3,3 km skiable, na Maribel, na 2,2 skiable km. N'okwu a, oge mmeghe nye ọha na eze bụ n'ehihie Satọde, site n'elekere 19:21.30 nke ụtụtụ ruo elekere XNUMX:XNUMX nke ụtụtụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ezie na Sierra Nevada pụtara ìhè dị ka ọsụ ụzọ na Spen, nke a kasị mara amara ugbu a maka ịgba ski n'abalị bụ ebe ntụrụndụ nke Catalan. Masella, na Pyrenees. Ọ inaugurated abalị skiing na 2013, na ebe ọ bụ na ọtụtụ puku na ọtụtụ puku skiers gara ya iri na atọ isi mkpọda ọ bụla oge, illuminated site a na-adọrọ mmasị netwọk nke ọkụ na-ekwe nkwa na-eme ka ahụmahụ a ọ bụghị nanị na-agaghị echefu echefu, ma ọrụ. Mkpọda ugwu na-eweta mkpokọta 7 ebuli n'ime awa ndị a, si otú a na-enye Masella aha nke Isi obodo ski nke Pyrenees. N'okwu a, usoro ihe omume enyere na klas ndị na-agba ski a na-agụnye naanị ehihie Thursday, site na 18.15:20 ehihie ruo 18.15:21 ehihie, na ehihie Saturday, site na XNUMX:XNUMX pm ruo XNUMX:XNUMX ehihie.
Iche GrandvarilaNa Andorra, ọ bụkwa ebe nzukọ maka ndị hụrụ ụkpụrụ a n'anya, ọ bụ ezie na n'ogo dị nta nyere na mpaghara skiable ha na-enye dị ntakịrị karịa nke Masella nyere. N'okwu a, ski mkpọda nke La Solana/Tubs Ọ bụ nke na-emeghe ọha na eze, site n'elekere 17:20 ehihie ruo XNUMX:XNUMX mgbede kwa Tọzdee na Satọde, yana oche oche ya.
Nhazi abalị: OGE zuru oke iji zụọ
N'ịchọpụta ọrụ ski nke abalị nke ebe ntụrụndụ na mba anyị na-enye, anyị ahụla ọtụtụ ụlọ ịgba ski na-eji oge a zụrụ azụ. N'ụzọ dị otú a, dị ka Ramón Boter, onye isi mgbasa ozi na ọdụ Masella (nke anyị kwuru banyere ya na mbụ) kwuru, klọb ndị a na-eji ohere ahụ zụọ ọzụzụ n'enweghị nnukwu skiers na-eme egwuregwu a maka ntụrụndụ.
Enwere isi ihe abụọ dị mkpa ị ga-eburu n'uche nke nwere ike ịgbanwe n'ime ski nke abalị ma e jiri ya tụnyere ụbọchị ski nke ụbọchị: obere okpomọkụ na ọkụ.
N’otu aka ahụ, okpomọkụ dị n’ugwu ndị dị n’obodo anyị na-ebelata nke ukwuu mgbe anyanwụ dara. Ọ dịghị mkpa ka ọ bụrụ etiti abalị ka nke a mee, n'ihi nke a, nanị mgbe mkpọda ugwu maka ịgba ski abalị meghere, oyi na-enwe ike ịbanye n'ọkpụkpụ anyị n'ụzọ dị mfe karịa ma anyị na-awụgharị n'ehihie. Nke a ga-emetụta ngwá ọrụ anyị na uwe, na-abawanye na mkpa ndo ọzọ, ikekwe na n'okpuru akwa akwa ma ọ bụ ọbụna na mgbakwunye ngwa.
Ma oyi abụghị nanị ihe anyị ga-atụle ma ọ bụrụ na anyị na-eche banyere ski n'abalị; na ìhè ma ọ bụ, kama, enweghị ya. Nke a pụtara na ị ga-achọ a ihe mkpuchi kristal doro anya para la práctica del esquí nocturno. En Uller disponemos de una ụdị dịgasị iche iche nke ngwaahịa N'ime nke ị ga-ahụ nke kachasị mma maka gị.
Ma ọ bụghị ya, akụrụngwa dị mkpa maka ịgba ski abalị bụ otu ihe anyị ga-eji na-eme ụbọchị ski.
GOGGLE SKI ziri ezi maka ịgba ọsọ abalị
N'oge a, ọ bụrụ na ahụhụ ahụ tara gị ma na-achọ ịnwa ịgba ski n'abalị, ikekwe ị na-eche ihe ọ bụ. ihe nkpuchi Uller Ha ga-abụ nke kachasị mma maka ọnọdụ nke usoro a na-eme. Kpọmkwem n'ihi ya, anyị ga-eme ka a pụrụ iche ngalaba na ụdị nke ị ga-n'ezie na-ahụ nke gị.
Ihe kachasị mkpa maka ịhọrọ ihe mkpuchi ski maka ịgba ọsọ n'abalị bụ na ha nwere kristal doro anya. Dị ka anyị kwuru na mbụ n'isiokwu a, ọ dị mkpa hụ na ọhụụ doro anya ma ghara ịgbagọ site na mbara ala, na-eburu n'uche na, n'adịghị ka mgbanwe ụbọchị, anyị agaghị enwe ìhè anyanwụ. Iji mee nke a, anyị ga-ahụ kristal ndị a doro anya na ofu lens nkpuchi ụdị de udi 1. Pero es que en Uller no sólo diseñamos productos de calidad, sino también versátiles. Por eso tenemos ụdị oghere oghere mgbanwe na, n'ime nanị sekọnd ole na ole, nwere ike isi n'ịbụ ihe mkpuchi ski maka ụbọchị anwụ na-acha, gaa na nke ụbọchị ígwé ojii. Nke ikpeazụ, Atiya 1, ga-abụ nke anyị ga-eji maka ọnọdụ ịgba ọsọ abalị, ebe ọ bụ na ìhè na-eru anyị anya dị obere ma e jiri ya tụnyere ụbọchị anwụ na-acha, ọ ga-adịkwa ka ọnọdụ ndị a na-enye n'ụbọchị anwụ. urukpuru.
Anyị maara na ikwu okwu banyere sensations bụ ihe nzuzo, ọbụna na-akpachi anya, ma anyị chere na, eleghị anya, ịmara na-agba akaebe, ma nke anyị otu na nke ndị ọzọ skiers, nwere ike ịgba gị ume ka ị na-agbalị a modality nke ski (ma ọ bụrụ na niile Na ma ọ bụrụ na ị gaghịzi agbada na mkpọda ọkụ).
Iji mee ntụnyere ngwa ngwa (na nnukwu), skiing na-ekerịta ntakịrị ka ịga n'ụsọ osimiri. Ha bụ oghere paradaịs nke okike na-enye anyị, ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụzọ ọzọ anyị na-emebu. Ugbu a, ihe bụ mgbe niile nkwarụ? N'ezie: ìgwè mmadụ. Ọ bụ ya mere mmetụta mbụ anyị na-ekerịta na ndị na-eme egwuregwu ski n'abalị bụ mmetụta nke udo. Ọ bụghị na-emekarị ịchọta egwu efu, ma anyị anaghị ekwu na ị ga-ahụ ya n'abalị, ma n'enweghị obi abụọ ọ bụla, olu na-ebelata yana mkpọtụ. Ihe ọzọkwa bụ na oge a na-agbago n'oche oche n'elu mgbada ahụ na-achọsi ike karị ma na-adọrọ mmasị naanị n'ihi ịgbachi nkịtị na enwere ike ịnụ ụtọ ya.
Na mgbakwunye, ịgba ski n'abalị na-enyekwa aka lekwasị anya na teknụzụ. Gịnị kpatara? tumadi maka mpụga stimuli. Mgbe anyị na-agba ski n'oge mgbanwe ụbọchị, enwere ọtụtụ puku ihe mkpali nke uche anyị na-enweta na, ya mere, nlebara anya anyị na ahụ na ụzọ anyị si agba ski dị obere. Ịgba ọsọ n'abalị na-enye gị mmetụta ụgha (ma mara mma) nke inwe ugwu ahụ dum n'onwe gị, ụbụrụ gị ga-etinyekwa igwe ya niile n'ime ngwa iji mee ka ahụmahụ a bụrụ ọrụ n'ezie. kpụ ọkụ n'ọnụ.
Enwere m ike ịfegharị n'abalị?
N'ezie ị nwere ike ski n'abalị! Na mma jikoro maka ya, N'ezie. Ka ọ dị ugbu a, ebe ntụrụndụ na-eme ka ndị na-egwu ski na-ekpori ndụ n'ụbọchị ski, bụ n'ihi na ha na-akwadebe ụfọdụ n'ime mkpọda ha maka ya, ma na ihe ọkụ ọkụ na ihe ọ bụla metụtara nlekọta snow. A ga-edobe akara nke ọma na usoro mgbanaka ndị ahụ na-agba ọsọ ma na-ekwe nkwa nchekwa, dịka na njem ụbọchị. Na mgbakwunye, a ga-agbalitekwa igwe ski dị iche iche. Ihe akaebe sitere n'aka ndị nwalere ya na-akwado na ịgba ski n'abalị na-enye ha ohere itinye uche karịa na usoro ahụ ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe mkpali anya ma ọ bụ ihe na-anụ ihe na-eme ka ha kwụsị.
Ebee ka m nwere ike ime SKI abalị na SPAIN?
N'ime panorama mba nke na-anabata omume nke egwuregwu ndị ọcha, anyị nwere ike ịchọta ebe ntụrụndụ atọ na-ekenye otu ma ọ bụ ụfọdụ n'ime mkpọda ha na ski n'abalị: Sierra Nevada (Granada), Masella (Gerona) na Grandvarila (Andorra). Mpaghara na agbụrụ ndị a kwadebere maka ụdị ski a nwere usoro a ga-ekpebi mgbe niile na mmalite nke oge ọ bụla. A na-enye ndị skiers nhọrọ ịzụta ngafe ski kwa afọ nke ha nwere ike iji ski na-akparaghị ókè, ma ọ bụ zụta ngafe ski maka abalị ndị ahụ akọwapụtara.
Achọrọ m ngwa akọwapụtara maka ski abalị?
Ịkwọ ụgbọ mmiri chọrọ ihe ndị bụ́ isi ga-adị mkpa mgbe a na-eme ya ehihie na abalị. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'uche na enweghị ìhè anyanwụ n'abalị pụtara na, n'ozuzu na karịsịa na ebe ntụrụndụ ski nke mba anyị, okpomọkụ na-ebelata. Nke a ga-amanye skier ka o mejuputa ihe mkpuchi ọkụ na uwe ya iji kwe nkwa ịnụ ụtọ ọrụ ahụ n'otu ụzọ ahụ ọ ga-adị na nhazi oge. N'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa iburu n'uche na visibiliti ga-adịkwa iche. A na-amụnye mkpọda ugwu ahụ, mana ọkụ arụrụ arụ anaghị ada na snow dị ka ìhè anyanwụ si eme, yabụ ọ dị mkpa ịnwe enyo nwere oghere doro anya. N'ụzọ dị otú a visibiliti agaghị agba ọchịchịrị (ihe, Otú ọ dị, ga-enyere anyị aka na nnọọ anwụ na ọnọdụ), ma ọ ga-abụ nke zuru okè.
Nwa Ushuaia / Nwa
Alpine Brown Mbe / Agba aja
Nye ọnụahịa6900 € 69.00 € Ụdị oge 17500 € 175.00 € Ị na-echekwa € 106